Njem Nleta Anya Caribbean Na-echekwa Nchebe Banyere Oge Ezumike
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Njem Nleta Anya Caribbean Na-echekwa Nchebe Banyere Oge Ezumike
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Data sitere na ndị otu ndị otu na -ahụ maka njem nlegharị anya na Caribbean na -atụ aro ngbanwe slide nke malitere na njedebe nke March 2020.
Mba CTO arụsila ọrụ ike iji nwee coronavirus na ịmaliteghachi akụ na ụba ha.
Caribbean na -amalite ịtụgharị ihe mmịfe ahụ nke malitere na njedebe nke March 2020.
Enwere ihe akaebe na-abawanye na-egosi na agụụ na-agụsi ike na-alaghachi azụ n'oge gara aga yana ọsọ ọsọ karịa ka e buru n'amụma.
Ebe oge okpomọkụ nke 2021 na-aga n'ihu, enwere ihe akaebe na-abawanye n'ahịa na-egosi na agụụ na-agụsi ike na-ebigbọ ngwa ngwa na ngwa ngwa karịa ka ndị na-ebu amụma buru amụma. N'otu oge ahụ, ndị Caribbean Tourism Organisation (CTO) data sitere na mba ndị otu anyị na -agba ume, ndị rụsiri ọrụ ike ijide coronavirus na ịmaliteghachi akụ na ụba ha.
Agbanyeghị na elu, mbelata pasent 60 na nkeji iri na ise mbụ nke 2021, ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga, nwere ike ọ gaghị adị ka ihe na -agba ume, nyocha nke ọma ga -egosi na Caribbean na -amalite ịtụgharị slide nke malitere na ngwụsị March 2020.
A na -egosipụta nke a site na mbelata ọkwa ọkwa nke Caribbean na -edekọ n'ime ọnwa iri na ise gara aga. Akụkụ mbụ nke 2020 bụ oge ikpeazụ nke ọkwa njem oge niile, mgbe nde mmadụ asaa na nde asaa (7.3 nde ndị ọbịa mba ofesi) bịara na mpaghara ahụ. Na Jenụwarị na Febụwarị 2021, ndị na -abata na mpaghara ahụ gbadara karịa naanị pasent 71 ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa abụọ n'afọ gara aga. Agbanyeghị, mbelata pasent 16.5 na Machị 2021 ma e jiri ya tụnyere Machị 2020 bụ ihe na -egosi ọkwa ngbanwe nke omume mbelata ọnụ ọgụgụ ndị mbata njem nleta.
Ihe data anakọtara site na ebe iri na abụọ na -akọ maka ndị bịara njem nleta maka Eprel 2021 na -egosi na nke ọ bụla n'ime ebe ndị a debara aha ha, ma e jiri ya tụnyere Eprel 2020, mgbe a na -ebelata ọrụ njem na mba ụwa. N'otu aka ahụ, ndị bịarutere njem nlegharị anya laghachiri na ebe na -akọ akụkọ maka Mee. Agbanyeghị, ekwesịrị ịkọwapụta na ọnụọgụ ndị ọbịa nọrọ ka nọ n'okpuru ọkwa kwekọrọ na 2019.
Nkwupụta ndị nso nso a nke ndị egwuregwu ụgbọ elu bụ ndị Caribbean bụ ahịa dị mkpa, na -agba ume. N'ime usoro mkparịta ụka anyị na nso nso a, ma onye isi oche nke British Airways, Sean Doyle, na VP nke ahịa maka Caribbean na American Airlines, Christine Valls, kwuru maka oke mmasị na njem na mpaghara. N'ezie, Nwada Valls gosipụtara na Caribbean na -abawanye maka ụgbọ elu ndị America, na -enwe nkezi 60 % ibu ibu site na ngwụcha Mee 2021, na ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ mere atụmatụ ịnwe ụgbọ elu kwa ụbọchị na mpaghara a n'oge ọkọchị karịa ka ọ mere na 2019. Ụgbọ elu Amerịka gwara CTO n'izu a na ọ gbakwunyere ụzọ ọhụrụ ise na Caribbean n'oge ọkọchị a, nke isii ga -agbakwunyere na Nọvemba - ọ ga -ejekwa ebe iri atọ na ise na Caribbean.
Dabere na ihe ngosi ndị a, CTO na -enwe nchekwube maka atụmanya maka njem oge ọkọchị, yana n'afọ ndị ọzọ ruo 2022.
Aghọtara na ekwesịrị inwe nchekwube ọ bụla site na eziokwu COVID-19 ọhụrụ na-ebili ngwa ngwa na UK na US, abụọ n'ime ahịa ahịa isi mmalite Caribbean. Ihe ndị a bụ ihe ịrịba ama na nje ahụ ka bụ nnukwu ihe iyi egwu nke nwere ike gbanwee ọganihu ọ bụla anyị mere ngwa ngwa.